Andro: 10 mey 2020
Firaisana am-biraon'ny AKondroUR Fiaramanidina an'habakabaka tsy nihetsika
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ny fampidirana amboara dia nanomboka tamin'ny Fiara AerialUR Unmanned Unerial, izay novolavolain'ny (TUSAŞ) avy amin'ny tetik'asa ANKA. TÜBİTAK Fiarovana sy fampandrosoana momba ny indostria momba izany [More ...]
Fahazoan-dalana amidy amin'ny rongony KOVİD-19
Ny minisiteran'ny Fahasalamana dia nanome fahazoan-dàlana amin'ny varotra iray novokarin'ilay orinasa fanafody iray eo an-toerana ho ampiasaina amin'ny fitsaboana ny coronavirus (KOVID-19). Kaonty media sosialy an'ny Filoham-pirenena Fahrettin Altun [More ...]
Manomboka miakatra indray any Corps ny Corona
Ny fitomboan'ny trangan'aretina corona andro vitsivitsy taorian'ny niafaran'ny faneriterahana ara-tsosialy tany Alemaina, dia nampanahy ny ahiahy ho afaka hifehezana ny valan'aretina indray. Ao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro amin'ny hopitaly Robert Koch Institute Institute [More ...]
Tetikasa Metro Airport Istanbul fitateram-peo TBM Tunnels
Nilaza ny filoha Recep Tayyip Erdoğan fa hanohy ny hazakazaka fanompoana izy ireo mandra-pofon'izy ireo farany. Erdogan dia nanatrika ny lanonana Gayrettepe-Kagithane Istanbul Seranan'ny Metro Airport TBM Tunnels Completion tamin'ny fihaonambe video ary nanao kabary teto. Avy amin'ny lahatenin'i Erdogan [More ...]
Nataon'i Sahur ny mpiasan'ny Asam-panjakana
Ny fivondronan'i Bursa Metropolitan dia namadika ny làlamby nampiharina tamin'ny faran'ny herinandro noho ny valan'aretina virus corona ho fotoana ary nanomboka nihetsika ny asphalting tamin'ny aretin-kozatra lehibe izay tsy nohavaozina nandritra ny 15-20 taona. [More ...]
Torkia AVM Rehefa hihaona Kolontsaina?
Mall ny kolontsaina ho an'ny voalohany Torkia nanomboka tamin'ny 1987 niaraka tamin'ny Galleria Mall. Nitohy niaraka tamin'ny Capitol AVM nosokafana tamin'ny taona 1993 ity mivezivezy ity. Torkia lehibe indrindra toeram-pivarotana lehibe ity 14 AVM'si [More ...]
Andro manakiana amin'ny fitateram-bahoaka miaraka amin'ny fanavaozana ara-dalàna rahampitso!
Ao anatin'ny sehatry ny ady amin'ny coronavirus, ny dingana fanavaozana no atao amin'ny faritra sasany, rahampitso. Ny taratry ny saina voalohany amin'izany dia azo inoana fa hiaina amin'ny fitateram-bahoaka. Satria mitohy ny alatsinainy 11 mey ny fameperana rehetra amin'ny fitateram-bahoaka. [More ...]
Mitohy ny asa fanavaozana ao amin'ny gara be ao Grand Istanbul
Ny IMM dia manohy mamadika ny fihetsiketsehana manerana ny tanàna ho serivisy noho ny fameperana tsy mandeha amin'ny làlana. Ny asa fanarenana, fanamboarana ary fanavaozana dia natomboka tao amin'ny Greater Istanbul Bus Terminal, izay nohararaotina hatramin'ny am-bolana lasa izay. [More ...]
Fampandrenesana fitaterana ny 11 Mey amin'ny IMM! Aleoko mandeha tongotra na bisikileta
Istanbul Metropolitan Munisipaly dia nampitandrina ny fanavaozana izay hanomboka ny alatsinainy 11 mey. Mampiasa fiara tsy miankina any Istanbul ny IMM, fa ny manan-danja indrindra, satria orinasa maro no hiasa indray. [More ...]
Rahoviana no Hanomboka ny Expeditions YHT?
TCDD Tasimacilik dia nahavita ny fanomanana ekipa sy fitaovana hananganana ny serivisy High Speed ​​(YHT), izay naato noho ny fipoahan'ny coronavirus; Miandry famantarana avy amin'ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Olcay Aydilek ao amin'ny Habertürk [More ...]
Ny mpiambina ny zandarimaria sy ny mpiasan'ny morontsiraka dia handray soa amin'ny fitaterana olona maimaim-poana
Nanapa-kevitra ny fanapahan-kevitra mifehy ny fampiasana serivisy fitateram-bahoaka. Araka ny fanitsiana, ny zandary sy ny mpiambina ny morontsiraka dia handray soa amin'ny serivisy fitateram-bahoaka an-tsitrapo maimaim-poana koa. [More ...]
Isan'ny an'ny İstanbul AVM 2020
Istanbul, Torkia amin'ny ankapobeny sürdüy ny fanavahana ny maha-tanàna tamin'ny AVM'si indrindra. Misy 125 isa any Istanbul. Toeram-pivarotana lehibe iray dia kasa hosokafana any Istanbul amin'ny 2020. Ity misy tranom-barotra 10 lehibe eto Istanbul [More ...]
Mankalaza ny fetin'ny Reny i Ramatoa Zübeyde
Ny ben'ny tanànan'i Izmir Metropolitan Tunç Soyer, izay nanatrika ny lanonana fahatsiarovana tao amin'ny Fasana Fahatsiarovana an'i Zübeyde Hanım tamin'ny Andron'i Neny, dia nilaza fa "Androany isika dia eo amin'ny fanatrehan'ny renintsika lehibe indrindra." Antitrantero fa tsy ampy ny fahatsiarovana reny fotsiny indray mandeha [More ...]
Iza moa i Süleyman Karaman?
Süleyman Karaman (1956, Alaçayır Village, Refahiye) dia injeniera mekanika izay niasa ho mpitantana foiben'ny TCDD. Fiainana fanabeazana Rehefa nanomboka ny fianarany tany Erzincan izy dia nandeha nianatra tao amin'ny Lisea Istanbul Pertevniyal ho an'ny fampianarana any amin'ny lise. [More ...]
Vitsy Misy fivarotana any Torkia?
Ao Tiorkia, dia misy amin'izao fotoana izao ny fitambarany 436 sekely Mall. Ny tranom-barotra miantsena dia mandray anjara amin'ny toekarena izay misy faritra 13,2 tapitrisa metatra toradroa. Ny sehatry ny toeram-pivarotana lehibe, izay mitombo isan'andro, dia mihena 2020 eo amin'ny faran'ny taona 445. [More ...]
Fanaraha-maso hentitra avy amin'i Izmir Metropolitan mankany amin'ny tranombarotra miantsena!
Izmir Metropolitan Municipality dia nampita ny fitsipika tokony harahina tsikelikely noho ny fipoahan'ny coronavirus, izay ampidirina am-panaovana tolotra amin'ny 11 Mey. Ny ekipan'ny polisy ao amin'ny Kaominina Metropolitan dia hanomboka fisafoana ny 11 mey. Izmir Metropolitan [More ...]
Bus 304 hafa handraisana anjara amin'ny ESHOT Fleet
Izmir Metropolitan Munisipaly dia mandefa bisy 134, misy ny lakolosy 170 ary solo solo 304. Homena ao anaty sivy volana ireo fiara ireo rehefa vita ny sonia ilay fifanarahana. Izmir Metropolitan Munisipaly, ilay sambo fiara fitaterana [More ...]
Fanohanana ny fahadiovana ho an'ny mpanety sy mpanao volo
Ny Kaominina Metropolitan İzmir dia hanome fanampiana amin'ny fahadiovana ho an'ireo barazy sy mpanao volo, izay haverina ny 11 mey ho ampifandraisina amin'ny boriborin'ny Ministeran'ny Atitany. İzmir Metropolitan munisipalin'ny Fiarovana ny tontolo iainana sy ny sampana mpitantana ny tarika Ny talen'ny mpitantana ny tarika [More ...]
Serivisy fitarihana ho an'ny mpianatra 19 tapitrisa sy ray aman-dreny amin'ny ady amin'ny 'Covid-12,5' nataon'i MEB
Nandritra ny vanim-potoana coronavirus dia mpianatra sy ray aman-dreny 1,5 tapitrisa 12 no nomena tari-dalana ao anatin'ny 500 volana. Ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Ziya Selçuk dia nilaza, 'Avy amin'ny fanomezana serivisy fitantanana feno toy izany [More ...]
Ny fitsipiky ny fanohanana ronono madinidinika ho an'ny taona 2020 dia tapa-kevitra
Ny fanampiana ny ronono manta dia hatolotra ny mpamokatra ronono amin'ity taona ity sy ny olana mikasika ny fitsipi-pitondran-tsena ny ronono. Ny fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena momba ny fanohanan'ny ronono maintso sy ny lalàna mifehy ny tsenan'ny ronono izay natao tamin'ny 2020, ofisialy [More ...]
Tonga ho any Mehmetçi ireo mpanampy amin'ny Robot!
Ny fifanarahana momba ny tetik'asa fanamboarana fiara tsy voatanisa eo amin'ny Kilonga antonony 2 dia nosoniavina teo amin'ny Fiadidian'ny Indostrian'ny Fiarovana (SSB) sy ASELSAN. Filohan'ny indostrian'ny fiarovana ny filoham-pirenena. Dr. İsmail Demir: “Tonga any Mehmetçi ireo mpanampy robotic! [More ...]
Ny tsindry amin'ny fiaran-dalamby dia tokony ampiasaina amin'ny fomba mahomby avy any Pekcan
Ny fivorian'ny Birao Mpanolo-tsaina faha-13, notarihin'ny Minisitry ny varotra, Ruhsar Pekcan, dia natao tamin'ny fakana horonantsary. Ho fanampin'i Pekcan, ny federasiona; Ny filohan'ny TİM İsmail Gülle, ny filohan'ny DEİK Nail Olpak, ny filoha TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu, [More ...]
Torkia nandefa Healthy Tourism Certification Program
Ny minisiteran'ny Kolontsaina sy ny fizahantany dia nanatanteraka ny programa fanamarinana ara-pahasalamana ara-pahasalamana ara-pahasalamana, izay hahomby amin'ny vanin-taona mafana amin'ny taona 2020. Eo ambany fitarihan'ny ministera, miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny Minisiteran'ny Fahasalamana, Fitaterana, Atitany ary Raharaham-bahiny, ary miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpandray anjara rehetra. [More ...]
Mitohy ny asan'ny lalan'ny kolotsaina Beyoğlu
Miaraka amin'ny tanjona kendrena ny kianja izay misy ny tilikambon'ny Galata izay sarobidy kokoa amin'ny fizahan-tany sy fanaovana azy ho faritra fiandohan'ny hetsika ara-kolontsaina sy zavakanto, ny asa ao amin'ny Tetikasa Kolontsaina Beyoğlu, nomanin'ny minisitry ny Kolontsaina sy ny fizahantany. [More ...]
Tonga amin'ny arabe any Bursa ny fitaterana kalitao
Ny lalana izay tsy nitazomana nandritra ny taona maro noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao Bursa dia mahazo fiononana noho ny fihoaram-pefy. Ny fivondronan'i Bursa Metropolitan, izay manavao ny aspirin'i Merinos - arahin'ny Acemler tamin'ny faran'ny herinandro teo, dia mitovy ankehitriny [More ...]